အကျိုးအကြောင်းမသိပဲ လာဆဲရင်တော့ ဆဲတဲ့သူအိမ်အထိ ပါးတက်ရိုက်မှာလို့ပြောလာတဲ့ ချမ်းချမ်း – Burmese Online News
အကျိုးအကြောင်းမသိပဲ လာဆဲရင်တော့ ဆဲတဲ့သူအိမ်အထိ ပါးတက်ရိုက်မှာလို့ပြောလာတဲ့ ချမ်းချမ်း
Published date August 5, 2020
ဒီရက်​ပိုင်း…ကျမ ကို စည်းလုးံသင့်ပြီ..ြ​​မန်​မာပြည်​…သီချင်းကြည့်ပြီး ဘုမသိဘမသိ​တ ..ဆဲ​ ​နေတာ အသိတရား​လေး​တေဝင်​ ​အောင်​​ပြောမှရ​တာ့မယ် ။ ကျမစပြီးဆို​ပေးပါဆိုကတည်းက ပါတီဆွဲဆိုမဆိုဘူး​ပြောထားပြီးသားပါ.. ဒီသီချင်းဟာ..ပါတီဆွဲ​တွေနဲ့ပြည်​သူ​တေစိတ်​မများရ​အောင်​ ..ကိုယ့်​တိုင်းပြည်​အတွက်​အမှန်​တရားကိုလမ်းပြ​ပေးမယ့်​ .သီချင်းမို့ဆို​ပေးလိုက်​တာပါ..​
ထမင်းစားရင်​နားလည်​မှာပါ…သီချင်းရိုက်တုန်းက​​လဲ ကိုယ်​ဂီတမာင်​နှမ​တေအားလုးံနဲ့အတူ ဆို​ပေးပါဆိုလို့ဆို​ပေးတာပဲ…ဘာအ​နှောင်​အဖွဲ့မှမပါလို့ဆို​ပေးတာ.. ကျန်​တဲ့သူတို့ဘာသာ ..စိတ်​ကူးနဲ့ ဇာတ်​လမ်း​တေထပ်​ထားတာ​တော့ကိုယ်​နဲ့မဆိုင်​ဘူး….သိလဲမသိဘူး… ကိုယ့်​လိပ်​ပြာကိုယ်​လုံတယ်​…edit လဲကိုယ်​မဆက်​​တော့မသိဘူး…
လာဆဲလို့ ကိုယ်​​တောင်​ မကြည့်​မိလို့ အ​ပြေးအလွှား ကြည့်​ရတာ… အရင်​တုန်းက election တုန်းကလဲ NLD အတွက်​ ပဲမယ်​ဆွယ်​​ပေးခဲ့တယ်​. အခုလဲ NLD ပဲ..အကျိုးအ​ကြာင်းမသိပဲလာဆဲရင်​တာ့ ..​ဆောရီးပဲ..ဆဲတဲ့သူကိုအိမ်​အထိပါးတက်​ရိုက်​မှာ…​အေး​ဆေး​နေလိုက်​​တော့… အခုတခြားပါတီ​တေ သီချင်းဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းလာတယ်​..ကျမကဒဲ့ပဲ​မေးတတ်​လို့ဒဲ့ပဲ​ပြောပါတယ်​.
ကျမအခုလက်​ရှိဆို​ပေးတဲ့ သီချင်း​တွေဆိုတာလဲ ဘယ်​ဘက်​ကိုမှဘက်​မလိုက်​တဲ့သီချင်းမို့ဆို​ပေးတာပါ. ကိုယ်တိုင်​ကိုယ့်​အသိစိတ်​ဓာတ်​နဲ့ မဲ​ပေးဖို့ပါပဲ ။ ကိုယ့်​တိုင်းပြည်​အတွက်​တကယ်​အားကိုးရမယ့်​..နိူင်​ငံတကာက ​လေးစားရတဲ့..ကျမတို့ရဲ့တစ်​ဦးတည်း​သော​ခေါင်း​ဆောင် အနှစ်​နှစ်​ အလလ ပြည်​သူအတွက်​ အချိန်​​ရောမိသားစု​ရောစ​တေးခဲ့ရတဲ့ သူ
ကိုယိ့တိုင်းပြည်​အတွက်​ သမိုင်းလှ​စေမယ့်​အလုပ်​ကိုပဲလုပ်​ကြရ​အောင်​…ကြိုက်​သလိုသ​ဘောထားကွဲလွဲနိုင်​ပါတယိ. ကျမမိတ်​​ဆွေ..အသ်ိ​တွေမှာလဲစစ်​တပ်​အသိ​တွေအသိုင်းအဝိုင်းအသိ​တွေရှိပါတယ်​ မိတ်​​ဆွေအကန့်​နဲ့ခင်​မင်​တာဖြစ်​လို့ ဘယ်​သူ့ကိုမှ မမုန်းပါ…ကိုယ်​ကြိုက်​တဲ့ပါတီမဲ​ပေးနိုင်​ပါတယ်​…ကျမက​တော့ NLD ပါပဲ…
ဒီရကျပိုငျး…ကမြ ကို စညျးလုးံသငျ့ပွီ..မွနျမာပွညျ…သီခငျြးကွညျ့ပွီး ဘုမသိဘမသိတ ..ဆဲ နတော အသိတရားလေးတဝေငျ အောငျပွောမှရတာ့မယျ ။ ကမြစပွီးဆိုပေးပါဆိုကတညျးက ပါတီဆှဲဆိုမဆိုဘူးပွောထားပွီးသားပါ.. ဒီသီခငျြးဟာ..ပါတီဆှဲတှနေဲ့ပွညျသူတစေိတျမမြားရအောငျ ..ကိုယျ့တိုငျးပွညျအတှကျအမှနျတရားကိုလမျးပွပေးမယျ့ .သီခငျြးမို့ဆိုပေးလိုကျတာပါ..
ထမငျးစားရငျနားလညျမှာပါ…သီခငျြးရိုကျတုနျးကလဲ ကိုယျဂီတမာငျနှမတအေားလုးံနဲ့အတူ ဆိုပေးပါဆိုလို့ဆိုပေးတာပဲ…ဘာအနှောငျအဖှဲ့မှမပါလို့ဆိုပေးတာ.. ကနျြတဲ့သူတို့ဘာသာ ..စိတျကူးနဲ့ ဇာတျလမျးတထေပျထားတာတော့ကိုယျနဲ့မဆိုငျဘူး….သိလဲမသိဘူး… ကိုယျ့လိပျပွာကိုယျလုံတယျ…edit လဲကိုယျမဆကျတော့မသိဘူး…
လာဆဲလို့ ကိုယျတောငျ မကွညျ့မိလို့ အပွေးအလှား ကွညျ့ရတာ… အရငျတုနျးက election တုနျးကလဲ NLD အတှကျ ပဲမယျဆှယျပေးခဲ့တယျ. အခုလဲ NLD ပဲ..အကြိုးအကွာငျးမသိပဲလာဆဲရငျတာ့ ..ဆောရီးပဲ..ဆဲတဲ့သူကိုအိမျအထိပါးတကျရိုကျမှာ…အေးဆေးနလေိုကျတော့… အခုတခွားပါတီတေ သီခငျြးဆိုဖို့ကမျးလှမျးလာတယျ..ကမြကဒဲ့ပဲမေးတတျလို့ဒဲ့ပဲပွောပါတယျ.
ကမြအခုလကျရှိဆိုပေးတဲ့ သီခငျြးတှဆေိုတာလဲ ဘယျဘကျကိုမှဘကျမလိုကျတဲ့သီခငျြးမို့ဆိုပေးတာပါ. ကိုယျတိုငျကိုယျ့အသိစိတျဓာတျနဲ့ မဲပေးဖို့ပါပဲ ။ ကိုယျ့တိုငျးပွညျအတှကျတကယျအားကိုးရမယျ့..နိူငျငံတကာက လေးစားရတဲ့..ကမြတို့ရဲ့တဈဦးတညျးသောခေါငျးဆောငျ အနှဈနှဈ အလလ ပွညျသူအတှကျ အခြိနျရောမိသားစုရောစတေးခဲ့ရတဲ့ သူ
ကိုယိ့တိုငျးပွညျအတှကျ သမိုငျးလှစမေယျ့အလုပျကိုပဲလုပျကွရအောငျ…ကွိုကျသလိုသဘောထားကှဲလှဲနိုငျပါတယိ. ကမြမိတျဆှေ..အသိတှမှောလဲစဈတပျအသိတှအေသိုငျးအဝိုငျးအသိတှရှေိပါတယျ မိတျဆှအေကနျ့နဲ့ခငျမငျတာဖွဈလို့ ဘယျသူ့ကိုမှ မမုနျးပါ…ကိုယျကွိုကျတဲ့ပါတီမဲပေးနိုငျပါတယျ…ကမြကတော့ NLD ပါပဲ…
ဇာဏ်ခီအတွက် အကယ်ဒမီပေးပွဲကိုရင်မခုန်ပါဘူးဆိုတဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ
မိခင်ဖြစ်သူကို စိန်နားကပ် ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ သားလိမ္မာလေး အောင်ထက်
အရက် ကို စိတ်နာသွားတဲ့ အကြောင်း ရင်နင့်စွာ ပြောလာတဲ့ လူရွှင်တော် သာဇံရဲ့ ဇနီး
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာနှင့် ဇနီးဖြစ်သူက အိမ်အကူ အမျိုးသမီးကို အက်စစ်ဖြင့်ပက်
မိသားစုရဲ့ နာမည်လေးတွေနဲ့ အမှတ်တရနေ့ရက်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်​ပေါ်မှာတက်တူးထိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ ခင်လှိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံ
ကလေးတိုင်း ကျောင်းပညာရေးရစေဖို့အတွက် ကြိုးစားနေမှုအပေါ် သံတမန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေ
ရန်ကုန်တွင် တည်ဆောက်မည့် ဒေါ်လာ၂ဘီလျံတန် ဓာတ်အားပေးစီမံကိန်း ဂျပန်တင်ဒါအောင်
မြန်အောင်မြို့တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေကြီးပြီး ကမ်းပါးပြိုနေ